> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka PC in iPad
Isku day inaad si ay u gudbiyaan files ka PC in iPad? Marka lahaanshaha iPad ah, oo aad jeceshahay waxaa laga yaabaa in ay soo dhoofsadaan music, videos, iyo sawiro iyo ka badan waa in ay hadda ka dibna, si aad iyaga ku raaxaysan karaan si xor ah. Laakiin, ma sahlana in la sameeyo. Haddii aad iPad waa cusub, waxaad ku dari kartaa faylasha waxay si by kaliya syncing Lugood la. Maxaa dhacaya haddii aad horay u iPad this markii qaar ka mid ah? Haddii aadan weli ku sameeyo, waxaad waayi doono wax kasta oo ku saabsan iPad. Waa wax la dhibsado, gaar ahaan marka faylasha on your iPad yihiin asalka ah.
Sidaas darteed, si ay u gudbiyaan files si iPad ka PC, aad si fiican isku dayi lahaa inaan xal kale. Waxaad qaadan kartaa Wondershare TunesGo ama Wonershare TunesGo (Mac) sida isku day ah. Tani PC kama dambaysta ah in suuqa kala iibsiga iPad samayn kartaa in aad waayo, hab fudud oo si sahlan. Sidaa daraadeed, waxa aad awoodi kartaa in aad nuqulka music, videos, sawiro iyo ka badan oo ka computer si aad iPad, iyo qeybsanaan.
Sidee si ay u gudbiyaan files ka PC in iPad
First of dhan, download computer si iPad kala iibsiga on your computer. Markaas, na raac si aad u hubiso ka soo tallaabooyinka fudud ee hoose. Halkan, kaliya qaadan version Windows sida isku day ah.
Tallaabada 1. Orod barnaamijkan
Orod computer si ay suuqa kala iibsiga ka dib markii ay ku rakibidda iPad. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad la your computer. Barnaamijkan ogaan doonaa iPad dhakhso.
Tallaabada 2. Transfer files si iPad ah
Halkan waxaan jeclaan lahaa in aan idinla wadaago sida ay u gudbiyaan music, videos, playlist, sawiro iyo xiriirada aad iPad mid mid.
Si aad u wareejin music in iPad, guji "Media" tab khaanadda bidix. Daaqadda warbaahinta, riix "Music" button. Markaad u timaadaan inaad suuqa kala music ah, guji "Add". Kana soobixiya doona ilaa daaqad files. Raadi files music ama folder music in aad go'aansato in aad soo dhoofsadaan in aad iPad. Markaasaan iyagii u geliyaan in aad iPad. Marka qaab music waa in aynan aad iPad, barnaamijkan kaa caawin doona inaad u badalo in ay iPad mid socon kara.
Fiiro Gaar ah: Tani PC inay kala iibsiga iPad si buuxda u la jaan qaada iPad mini, iPad bandhigay isha, iPad Cusub, iPad 2 iyo iPad.
Waxaa la mid ah in ay soo dhoofsadaan videos in aad iPad. Guji "Media"> "Videos"> "Add".
Si aad u wareejin playlist in aad iPad, waa in aad ku dhufo "playlist". Guji "Add". In liiska jiido-down, doortaan "Add playlist ka computer".
Haddii aad doonayso in aad nuqul ka photos jecel in aad iPad, waa in aad ku dhufo "Sawirro" tab. Dhammaan albums waxaa lagu soo bandhigaa xaq. Calan album ah si loo badbaadiyo sawirrada. Ama waxaad sidoo kale riixi kartaa "Add" si ay u abuuraan album cusub. Markaas furo album oo guji "Add" in ay dajiyaan aad sawiro la doonayo.
Haddii aad jeceshahay in aad isticmaasho iPad in aad sameyso shaqo, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u gudbiyaan xiriirada waxa ku jira. Si aad u dajiyaan xiriirada, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhufo "Xiriirada" tab. Daaqadda xiriirada, guji "Import / Dhoofinta". Markaas dooran "Import xiriirada ka computer." In ay hoos u soo dejiyey liiska, aad qabto doorashooyin, ka file vCard, ka Windows Live Mail, ka Outlook Express, ka Outlook 2003/2007/2010/2013 oo ka Windows Cinwaanka Book. Dooro mid ka mid ah. Markaas ka heli file xiriir ah oo soo dhoofsadaan.
Fiiro gaar ah: Waqtiga xaadirka ah, version Mac ma taageeri wareejinta xiriirada ka PC in iPad.
Taasi tutorial ah oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan files ka computer si iPad. Hadda, kaliya download computer si kala iibsiga iPad u leedahay in isku day ah!